Intisaar Maxamuud: “Gabadhii hanka fog laheyd misna ku waalneyd kubada cagta” | Somaliska
Intisaar Maxamuud: “Gabadhii hanka fog laheyd misna ku waalneyd kubada cagta”
“Magaceyga waa Intisaar Maxamuud, waxaan ku soo bar baaray Sacuudi Careebiya waalidkeygana waxaa ay ka yimaadeen Soomaaliya. Muddo sadex sanno ah ayaan daganahay dalkan Iswiidhan, mustabalka waxaan doonayaa inaan noqdo dhaqtarad qaliinka sameeysa oo taqasuska leh”.
Waxaa sidaa hadalkeeda ku biloowday gabadha lugu magcaabo Intisaar Maxamuud oo ah gabar ku soo bar baartay Sacuudi Careebiya haatana ku sugan dalka Iswiidhan. Gabadhan oo ah gabar hami iyo yool fog leh ayaa u warantay idaacada raadiyo Iswiidhan gaar ahana barnaamijka loogu magac darray “Iswiidhanta cusub” Waxeey iyadoo barnaamijkaan kaga warameeysa yoolkeeda ay sheegtay ineey dooneeyso ineey ka sal gaarto qaar ka mid ah yoolakeedaasi oo haatanba ay u gogol xaarideedii ku jirto.
Mar ay ka hadleeysay sida ay u rumeeyn karto mid ka mid riyooyinkeedaas ayey sheegtay in dadku ku yiraahdaan waa “howl dheer ee sideed uga bixi doontaa.?” Iyadoo taasi ka warameeysa ayey tiri “Waan isku kalsoonahay, waxaana igu heereysan (Ku taageera fikirkeeda) dad aniga aaminsan” Inkastoo intisaar dooneeyso ineey noqoto dhaqtarad hadana waxaa ay sidoo kale dooneeysa ineey noqoto ciyaaryahan kubada cagta si wanaagsan u ciyaarta.
Haatan waxeey tabaro la qaadataa koox kubada cagta oo gabdhaha ah kana tirsan degmada Eskilstuna ee duleedka magaaladda Stockholm. Waxaa ay ku soo kortay dalka Sacuudiga oo ah dal dhinac kasta ay aad u xadidan yihiin dhaq dhaqaaqyada dumarka, in laga helo koox gabdho ah oo ciyaara kubada noocyadeeda kale duwani waa calaacasha oo timo ka soo baxa. Muddo dhowr bilood ah ayey kooxda ay Intisaar la ciyaaryo ku bada ahaayeen koox tan iyo carruurnimadooda soo ciyaarayeen dhinac kastana ka dhisan yihiin tababar iyo qibrado u leeyihiin ciyaarta kubada cagta, waxaase dhici karta in Intisaar kala kulanto caqabado dhinaca taatikada iyo xooga la qabsasho la’aan ah. Balse arrinta xiisaha leh ayaa ah in hooyadeed ku dhiirageliso ciyaarta kubada cagta una sii iibisay kabihii iyo dharkii lugu ciyaarayey kubadda cagta, taasina waxaa ay kor u qaaday niyadeedii iyo kalsoonideedii qof ahaaneed.
Intisaar oo barnaamijka la wadaageeysay waayaheedii nololeed ee Sacuudiga ayaa tilmaantay in iska daa gabari ciyaarto ee xitaa loo diido daawadashada kubada cagta.”Dabcan gabdhaha looma ogola haddii gabadhuhu ciyaaraan kubadda talow wiilashuna maxeey ciyaari ayaa la yiraahdaa meeshaas” ayey tiri Intisaar oo sida waadix u muujineysa in riyo noocas ah oo gabdhaha u furan aaneey jirin Sacuudiga. Sanad dugsiyeedka soo socda ayaa lugu wadaa ineey ay bilowdo dugsi sare bilowdo oo ay dhigato culuumta seyniska.
Haddii ay Sacuudiga joogi laheyd waxaa iyadoo aan dhameeysan iskuulka noqon laheyd gabar la guursaday oo guri joogta ah. ” Waan ka xumahay inaan sidaas iraahdo, hadaan baaqi ku sii ahaan lahaa halkaas nin ayaa la igu dari lahaa oo aan guri joogto noqon lahaa inkastoo aan mar uu nin guursan lahaa, mana jiri laheyn ra’yi aan leeyahay oo socon lahaa, runtii hadaan ka hadlano haweenka dalkaasi xaquuq ay leeyihiin ma jirto iyo fikir ay cabiiri karaan” ayey tiri Intisaar oo dhinacyo kala duwan ka soo qabaneeysa noloshada dalkaas carbeed ee Sacuudi Careebiya.
Ugu dambeyntii in kastoo Intisaar ka mid tahay gabdho faro ku tiris ah oo soomaaliyeed oo doonaya ineey hankooda ka sal gaaraan ayaa hadana waxaa ammaan mudan sida ay u tahay qof dhiiran oo aan saxaafada iyo u waramisteeda ka gaban bal waxaaba la oran karaa waxeey mudan tahay ku dayasho. Iyadoo ay jiraan gabdho badan oo soomaaliyeed oo xiiseeya ciyaarta kubada cagta ayaaneey jirin hadana waalid ku dhiirageliya oo ku taageera sababo la xirriira dhaqanka iyo diinta oo ah kuwo la aaminsan yahay ineey yihiin caqabadaha ugu horeeya ee hortaagan.
W/T: Somaliska- Göteborg
“Ganacsadaha khaatka ee ugu weyn Sundsvall oo la soo xiray”
qofka qoraalka soo qorayoo dhaqanka iyo diinta suuban ee aan heysano hadii aad aaminsaneyn maxaad aaminsan tahay? Mida kale yaa u baneeyey qof dumar ah in aay cowradeeda banaanka soo dhigta mar hore ayaan kaa shakiyey inaa daciif tahay oo aad ka liidatid xaga diinta, war kuwa aan wadankooda ayaa nagu ixtiraamo diinteena iyo dhaqankeena caruurteena quraanka loo ogol yahay in aay ku bartaan wadankan aan ku noolnahay ee kuwa dhunsan intaad hanuunka u iftiimi laheyd ayaad sacuudi iyo dalalka muslimka wax ka sheegtaa ee is qabo qofka qoray warkan….
asc waxaan layaabay wuxuu leeyahay waxaa caqabad ku ah dhaqanka iyo diinta.Haddaba hadii labadaasi caqabad ku yihiin,ma inay labadaasba meel iska dhigtaa, mase waa inay raacdaa sida diinteena suubani ogoshahay?Tan labaad waxey tiri haddii aan sii joogi lahaay sacuudiga waa lay guursan lahaay oo waxaan joogi lahaay guriga waxayna leedahay mar uun waa lay guursan lahaay.Haddaba hadiiba ay ogtahay in maalin uun laguursanaayo oo ahy doonayso inay hooyo noqoto waa maxay baahiday u qabto inay ciyaarto oo waqtiga iskaga lumiso waxaysan natiijo fiican ka keenayn?mida kale waxaan layaabay gabar walba oo ka timaada sacuudiga waa inta badan waa maxay sababta ay dharka udhigtaan una caytamaan?waxaan layaabay waxaan aqaanaa gabdho kayimid sacuudiga oo markey imaanayeen asturnaay hadana runtii aad isleedahay ma gaalbaa oo aad kashakinaysid inaad ku salaantid salaanta islaamka.mida kale waxaa la ogaaday adaka inta badan ka baxa diinta islaamka waxay ka yimaadaan sacuudiga. Ilaa iyo hadda waxaan garan waayey sababtaas.Talo waxaan la talinayaa qofka wobsedkaan iska leh inaad iska dhaafto waxyaabaha aan wanaagsaneyn in laga hadlo amaba denbi kaaga imaanaayo waa hadii aad ilaahay ka baqayso, qofna haku dhiiri gelin wax sumcadaada wax u dhimaayo,waxaad qorto waad heli kartaa oo wanaagsan lakiin iska dhaaf waxyaabaha maalaayacnigaa.Ogoowna wax kastood qorto qofkii qaato adiguna qayb ayaad ku yeelan doontaa waa hadii wax diinta islaamka wax u dhimaayo aad faafisid, wbtq HADII AAN WAX QALDAN KAA SHEEGAYNA IGA RAALI AHOOW ASC WR WB